မနှောက်ယှက်ပါ - ရီးရဲလ် Pranksters များအတွက်တစ်ဦးကဂိမ်း! APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » မနှောက်ယှက်ပါ - ရီးရဲလ် Pranksters များအတွက်တစ်ဦးကဂိမ်း!
မနှောက်ယှက်ပါ - ရီးရဲလ် Pranksters များအတွက်တစ်ဦးကဂိမ်း! APK ကို
Knock, ခေါက်! မစ္စတာ Grumpy McGrump အပျော်ရွှင်ဆုံးသည်မဟုတ်, သူကကျိန်းသေအဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်အများဆုံး Hilary marmot ဖြစ်ပါတယ်။ , တံခါးကိုခေါက်ပြတင်းပေါက်အသာပုတ်ပါနှင့်မစ္စတာ McGrump ထံမှရယ်စရာအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုစစ်ဆေးနိုင်ရန်ခေါင်းလောင်းမြည်။ ရုံဖမ်းမိရဘူး! မစ္စတာ McGrump ထံမှတုံ့ပြန်မှုများစွာကြည့်ဖို့လှည့်ကွက် Play! ကလေးများကချစ်ကြ!
မစ္စတာ McGrump ကနေအံ့သြစရာအမှတ်တရပစ္စည်းများစုဆောင်း! တစ်ခုချင်းစီကိုထိပုတ်ပါပုနှောင့်အယှက်-o-မီတာမှအနည်းငယ်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သင်ထိပ်ဆုံးရောက်ရှိအခါတိုင်းသငျသညျအစဉျအမွဲစောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ဦးအမှတ်တရပစ္စည်းရ! သင်သည်ထိုသူတို့အားလုံးရနိုင်မလား?
NEW တံခါးကို Bell
• Collection အမှတ်တရပစ္စည်းများ
•ကြောင်နှင့်ခွေးကိုကျော်ဖြစ်ကြသည်။ Marmots ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်သည်!
မနှောက်ယှက်ပါ - ရီးရဲလ် Pranksters များအတွက်တစ်ဦးကဂိမ်း!
37.86 ကို MB